मुखको महिमा (ब्यङ्ग्यबन्ध) | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीमाथि श्रम शोषण
मेरी क्रिसमस!!! →
यहाँ मुखको महिमाको कुरा गर्दा नाकको मुन्तिर खुत्रेको प्वाल अकारको भागलाई मुख भनिन्छ । यो नभएको मान्छे नपाईने हुँदा सबैलाई यसको ’boutमा थाह नै छ । भगवानले एउटा यहि अङ्ग दिएका रहेछन जसले धेरै काम गर्छ । आँखाको हेर्ने मात्र काम छ । नाकको सुँघ्ने काम मात्र छ । तर मुखको काम खाने, बोल्ने, हाँस्ने, काँस्ने, हकार्ने, डकार्ने, खकार्ने, टोक्ने देखी रिस पोख्ने सम्म काम गर्छ । धन्य छ मुखलाई यती धेरै काम गरेकोमा ।
खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन । छेकोस पनि कसरी जुगाले ? अबका दिनमा फेरी कस्ले पो जुंगा पाल्छ र ! खाने मुखलाई छेक्न सकेको भए आज देश र जनताको गती यस्तो हुने थिएन । बजार भाउ देखी पेट्रोलको भाउ बढाउँदा कमिसन खाने मुखलाई कस्ले छेक्ने ? फेरी खाने मुखलाई छेक्न थाल्यो भने एक दिनमा हुने काम एक बर्षमा पनि नहुन सक्छ । बरु यो मुखमा बोका देखी मकैको घोगा, रोस्ट देखी टोस्ट, तुम्बा देखी तरुनिको चुम्बा हालिदियो भने महादेबले नगर्ने काम पनि यै मुखले गर्न सक्छ । मुखको महिमा पनि बिचित्रको नै छ । यती सानो भएर पनि अल्कत्र देखी नदिनाला, हवाइजहाज देखी पुलसम्म झ्वाम्म जान्छ, बन देखी हरियो धन, हात्ती देखी लात्तिसम्म ल्वाम्म जान्छ । यत्रो-यत्रो खान सक्ने मुखलाई, जाबो जुंगाले के असर पार्छ र । हिजो-आज मुखले खाँदा जुंगाले पनि स्वाद लिन थालेको सुनिन्छ । त्यसैले सरकारले पालेको जुंगाले खाने मुखलाई छेक्नुको साटो स्वादमै रमाउन थालेको छ । तपाईं कुनै कदाचित भुलेर घुसखाने मुखको ’boutमा सरकारी जुंगालाई खबर गर्नु भयो भनें झन जुंगाले त मेरो भाग कती पर्छ ? नत्र खाने मुखलाई जुंगाले के गर्छ भनी झन बार्गेनिङ्ग गरेको कुरो यि दुई आँखाले पत्र-पत्रीकामा पढ्न पाईन्छ ।
यो मुखको महिमा गरी साध्य छैन गर्‍यो भने कती अध्याय नै बन्छ । यो मुखको कुनै ठेगान नै छैन । आज के खाको छ, भोली के खाको छ, आज के बोल्छ, भोली के बोल्छ । अझ यो नेताहरुको मुखको के कुरा । पार्टिका मुखका कुरा के गर्नु । बैठकमा एउटा कुरा गर्‍यो । जनतालाई अर्को कुरा । यहि मुखको ठेगान नहुँदा आजसम्म सम्दिधान बन्ने ठेगान छैन । आज तीन पार्टिका मुख तीन तिर फर्किएको हुँदा जनताले यो परीस्थिती भोग्नु परेको छ ।
यहि मुखले मान्छेलाई दु:ख दिलाउन सक्छ, यहि मुखले मान्छेलाई सु:ख दिलाउन सक्छ । घरकी बुढीले मुख लगाउँदा कत्रो रडाको चल्छ । कतिको घर ग्रिहस्ती ढल्छ । यै मुखले श्रीमतिलाई मिठो बोल्दा श्रीमतिको अनुहार झलल बल्छ । त्यसैले बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भनिएको हो । मिठो बोल्दा पैसा पनि नलाग्ने, झन मान्छेको रिस राग नै भाग्ने हुँदा मिठो बोलौं यो मुखले । यै मुखले मिठो बाचन गर्दा यज्ञ महायज्ञमा करोडौं धन सम्पत्ति दिने दम्पती हामीले देखेका छौ । त्यसैले मुखको महिमा अपार छ । आजलाई मुखको महिमाको अध्याय यति नै । मुखाय नम:जय काउकुती ।
One response to “मुखको महिमा (ब्यङ्ग्यबन्ध)”
RAJENDRA SHARMA "RAJAN" | 25/12/2010 मा 3:12 अपराह्न |
tapaiko byangyatmak lekh nikai ramrolagyo pheri pheri pani lekhdai garnu yahi shubha kamana marrry x-mas